Ngige ekwuola na agaghị ebuli ụgwọ opekata mpe na Septemba - BBC News Ìgbò
Ngige ekwuola na agaghị ebuli ụgwọ opekata mpe na Septemba
30 Mee 2018
Image copyright @LabourMinNG
Nkenke aha onyonyo Ngige so na Kọmiti na-ahụ maka ibuli ụgwọọnwa
Minista na-ahụ maka ọrụ na iwe ọrụ bụ Chris Ngige ekwuola na o cheghị na gọọmentị ka ga-ebulinwu ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ndịọrụ a na-akpọ 'minimum wage' na Septemba.
Ngige kwuru nke a ka ya na ndị ntaakụkọ zukọrọ n'Abuja ụnyaahụ, kwuru na Septemba abụghị oge ha hibere iji bulie ụgwọ ọnwa opekatampe, kama na ọ bụ oge ha yiri izukọ wee kaa okwu ọnụ n'ihe gbasara ma a ga-ebuli maọbụ agaghị ebuli ya bụ ụgwọ.
"Kọmitee nke na-ahụ maka ịwepụta ụgwọ opekatampe ọhụrụ kwesịrị ịka okwu ọnụ na ngwụcha Septemba, ma gwa gọọmentị ihe ha kpebiri ka ha nwee ike tulee ya ma nabata ya tupu e ziga akwụkwọ ọrụ ya n'ụlọomeiwu ukwu."
Ndị agha chọrọ ka e bulie ụgwọ ọrụ opekatampe ha n'Enugwu
Ngige: Anyị ekweghị na-eji otu nde naira kwaa Ekwueme
Ngige kwuru na ikike ịkwụ ụgwọ a so n'ihe kacha mkpa ha ga-elebanye anya ka ha na-ekwu maka ụgwọọnwa opekatampe a.
O kwuru na ọ bụ ịmata ihe ndị ọ gbasara gụnyere ndị ọchịchị obodo nakwa ndị ọrụ na-abụghị ọrụ gọọmentị chere, mere kọmitee ha ji bido ịgagharị gburugburu Naịjirịa.
O kwukwara na ọ bụ ka ha na-eme ngagharị a ka ha ji hụ na ụfọdụ ndị ọchịchị obodo tinyere akwụkwọ ka e bido ịkwụ ego sitere na puku naịra iri abụọ na abụọ (N22,000) ruo puku naịra iri ise na asatọ (N58,000), ebe ụfọdụ kwuru ka ha ka na-akwụ puku naịra iri na asatọ (N18,000) maka na ọ ka na-ara ụfọdụ steeti ahụ ịkwụnwu nke dị adị.
Ngige kwuru na ụfọdụ ndị gọvanọ kwenyere na etu ụgwọ opekatampe a ga-esi dị ire bụ na a ga-atulegharị etu e si ekesa ego a na-enweta ugbua ka o nwee ike bara ndị steeti nakwa ndị ime obodo.
Akụkọ kachasị n'abalị a: Nke a bụ ncheta ọchịchịonyekwuoucheya ikpeazụ gị- PDP
Umahi: Onye ahịa ọbụla na-emepeghị ọdọ ahịa ya echi chefuo ya
Ihe 5 kacha mkpa Buhari kwuru n'ụtụtụ a
30 Jenụwarị 2018
Gọọmentị agaghị akwụnwụ ụgwọ onwa ọhụrụ - NLC
27 Febrụwarị 2018
Ọrịa Lassa Fever emefuola ndị mmadụ atọ n'Ebonyi
'Agaghị m agwa di m ego ole m na-akpata'
Ndị omekome agbagbuola otu onye ndu APC n'Imo steeti
Eunice Atuejide apụọla n'ọsọ ndị na-azọ ọkwa onyeisiala